ဟဒီးဆ်: အုပ်ထိန်းသူမပါဘဲ နိကာဟ်ထိမ်းမြားမှု အထမြောက်မည်မဟုတ်ပေ။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အုပ်ထိန်းသူမပါဘဲ နိကာဟ်ထိမ်းမြားမှု အထမြောက်မည်မဟုတ်ပေ။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . မိသားစုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ထိမ်းမြားခြင်း။ .
عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نِكاح إلا بِوَلِيّ».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد]
အဗူမူဆာ အလ်အရှ်အရီ(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အုပ်ထိန်းသူမပါဘဲ နိကာဟ်ထိမ်းမြားမှု အထမြောက်မည်မဟုတ်ပေ။
ဤဟဒီးဆ်တော်သည် နိကာဟ်ထိမ်းမြားမှုတွင် ‘ဝလီ’ အုပ်ထိန်းသူ၏ အရေးပါမှုနှင့် ၎င်းသည် နိကာဟ်အထမြောက်ရန်အတွက် စည်းကမ်းချက် တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ ထို့ကြောင့် နိကာဟ်ထိမ်းမြားမှုကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မည့် ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူမပါဘဲ နိကာဟ်ထိမ်းမြားမှု အထမြောက်မည်မဟုတ်ပေ။ ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူတွင် ရှိရမည့် စည်းကမ်းချက်များမှာ- တရားဝင် တာဝန်ရှိသူဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသားဖြစ်ခြင်း၊ နိကာဟ်ထိမ်းမြားမှု၏ ကောင်းကျိုးများကို သိနားလည်သူဖြစ်ခြင်း၊ ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူနှင့် သူ၏အုပ်ထိန်းမှုအောက်တွင်ရှိသော အမျိုးသမီးသည် ဘာသာတူခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအရည်အချင်းများနှင့် မကိုက်ညီသူသည် နိကာဟ်ထိမ်းမြားရာတွင် ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူဖြစ်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီသူမဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ (အုပ်ထိန်းသူမရှိ၍) အခက်အခဲရှိပါက မွတ်စ်လင်မ်အစိုးရက အမျိုးသမီး၏ ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) ဟင်ဒီ ဆင်ဟာလီ ကာ့ဒ် ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ် ထိုင်း
1: ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူရှိနေခြင်းသည် နိကာဟ်ထိမ်းမြားမှုတရားဝင်ရန်တွက် စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
2: ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူသည် အမျိုးသမီးနှင့် ဆွေမျိုးအနီးစပ်ဆုံးတော်စပ်သည့် အမျိုးသားဖြစ်ရမည်။ ဆွေမျိုးအနီးစပ်ဆုံး အုပ်ထိန်းသူရှိပါလျှက် ဆွေမျိုးတော်စပ်မှု ဝေးသည့် ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူက အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ထိမ်းမြားပေးခြင်း မပြုရပေ။
3: ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူ မပါသော နိကာဟ်ထိမ်းမြားခြင်းသည် မှန်ကန်မှုမရှိပါ။ ၎င်းကိုတရားမဝင် နိကာဟ်ထိမ်းမြားမှုဟုသာ သတ်မှတ်ပြီး အုပ်ချုပ်သူထံ၌လည်းကောင်း သို့မဟုတ် တရားတော်အရ ကွာရှင်းခြင်းမျိုးဖြင့်လည်းကောင်း နိကာဟ်အား ဖျက်သိမ်းပစ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
4: အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် သူမ၏ ဆွေမျိုးများအနက်မှ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူများအနက်မှ ‘ဝလီ’မရှိလျှင် သူမ၏‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူသည် အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ သို့မဟုတ် သူ၏ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူမရှိသူများအတွက် ဘုရင်(အုပ်ချုပ်သူ)သည် ၎င်းတို့၏ ‘ဝလီ’ပင်ဖြစ်သည်။
5: ‘ဝလီ’အုပ်ထိန်းသူသည် ဆင်ခြင်တုံတရားရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အုပ်ထိန်းသူသည် ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိပါက အမျိုးသမီး၏ ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . မိသားစုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ထိမ်းမြားခြင်း။ .
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی हिन्दी සිංහල كوردی Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ் ไทย
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +ဟင်ဒီ +ဆင်ဟာလီ +ကာ့ဒ် +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ် +ထိုင်း